Qaphela: Eli nqaku alithethi ngeemeko ezinento yokwenza nobhubhane oyi-coronavirus (COVID-19). Hlola inqaku lethu elithetha ngeemeko ongenakuzinceda zeCOVID-19 ukuze ufunde ngeemeko ezinento yokwenza neCOVID-19 eziqukiweyo, ingakumbi imali ebuyiswayo nengabuyiswayo ngokubhukisha okwenziwe emva kwe-14 kaMatshi 2020.
Le polisi isebenza kwiintsuku zokungena ezingaphambi okanye nge-19 kaJanuwari 2021. Kwiintsuku zokungena ezisemva kwalo mhla, kuza kusebenza ipolisi ehlaziyiweyo engezantsi.
Isebenza kude kube: nge-19 Januwari 2021
Sisenokukubuyisela imali yakho okanye singakohlwayi ngokurhoxa kwakhoukuba kufuneka urhoxe ngenxa yemeko engalindelekanga engaphaya kwamandla akho. Apha ngezantsi kudweliswe iimeko ethetha ngazo Ipolisi Yethu Yeemeko Ongenakuzinceda. Ngaphambi kokuba urhoxise, jonga ukuba imeko yakho ifakiwe na kuludwe olungezantsi nokuba ungakwazi na ukunikezela ngamaxwebhu afunekayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba ukurhoxa ngaphandle kokohlwaywa kufumaneka kuphela xa kukho iimeko ongenakuzinceda ezenzeke ngaphambi kosuku obhukishele ukungena ngalo. Ukongeza, Ipolisi yethu Yemeko Ongenakuyinceda ayisebenzi xa kubhukishwe iLuxe okanye iLuxury Retreats, kuba zona zingena Kwipolisi yeLuxe Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe.
Iimeko ezifuna amaxwebhu
Ukufa kombuki zindwendwe, kondwendwe, okanye komntu oncedisa ekubukeni iindwendwe, kondwendwe olongezelelekileyo, kwelungu lentsapho elikufuphi, okanye komntu ohoya umntu ogulayo. Uza kucelwa ukuba uveze elinye lala maxwebhu:
Iinkcukacha ezingobomi baloo mntu uswelekileyo
Inqaku elikwiphepha-ndaba elithetha ngomfi
Ukugula kakhulu ngesiquphe okanye ukonzakala okuchaphazela umbuki zindwendwe okanye umntu oseluhambeni. Uza kucelwa ukuba uveze ingxelo kagqirha eqinisekisa ukuba loo mntu akanako ukubuka iindwendwe okanye ukuhamba ngenxa yokugula kakhulu ngesiquphe okanye ukonzakala. Loo ngxelo kufuneka ibe nomhla osemva kokubhukisha ize ingeniswe zingaphelanga iintsuku eziyi-14 emva kokuba kurhoxisiwe. Okwangoku, iimeko zangaphambili ebezisaziwa ngulo mntu ngexesha lokubhukisha kwakhe aziqukwanga kwiPolisi Yemeko Ongenakuyinceda.
Izinto ezigunyaziswe nguRhulumente kuquka umsebenzi wokugweba, imiqathango yokuhamba, ukuvela enkundleni, kunye nokuthunyelwa emkhosini. Uza kucelwa ukuba uveze ikopi esemthethweni enomhla osemva kokubhukisha, kuquka igama lomntu oza kwenza loo nto ifunwa ngurhulmente.
Xa kuye kwabakho umonakalo ongalindelekanga endlini, kwabakho into efuna ukulungiswa, kunye nengxaki ngezinto ezinokusetyenziswa kwindlu yeAirbnb eyenza kube yingozi ukubuka iindwendwe kuyo, okanye ibangele kube nzima ngeendwendwe ukufumana izinto ezifana namanzi okusela. Oku akukuquki ukulungiswa kwendlu okucetyiweyo. Uza kucelwa ukuba uveze onke la maxwebhu alandelayo:
Ubungqina obubonisa ukuba ingxaki iyalungiswa
Into eqikelela ixesha eza kulunga ngalo
I-invoyisi ebonisa ukuba kuyalungiswa
Iifoto ezibonisa umonakalo
Ukuphazamiseka kwezothutho okwenza ungakwazi ukuya kwindawo ofuna ukuya kuyo, kuquka ukuvalwa kweendlela nokurhoxiswa kweenqwelo-moya apho kungekho enye indlela yokuhamba. Oku kuquka ukuvalwa nokurhoxisa okubangelwe zintlekele zemvelo, ezinjengeenyikima okanye izaqhwithi ezinamandla. Uza kucelwa ukuba uveze isaziso sokuvalwa kwendlela, okanye amaxwebhu avela kwinkampani yenqwelo-moya erhoxisiweyo uze uveze namaxwebhu angqina ukuba awunakukwazi ukuhamba uye kwindawo oya kuyo.
Ukurhoxiswa kohambo ngetreyini, ngebhasi, okanye ngenqanawa xa zingekho ezinye iindlela zokuhamba ngolo suku. Uza kucelwa ukuba uveze amaxwebhu abonisa ngokucacileyo ukuba loo nkampani yezothutho ibingasebenzi ngolo suku, njengefoto yewebhusayithi yalo nkampani ilinki enengxelo esemthethweni evela kuloo nkampani.
Iimeko ezifuna ukuhlolisiswa ngokukhethekileyo
Akukho xwebhu luza kufunwa kwezi meko, kodwa iqela lethu leengcali liza kuhlola imeko nganye ukuze liqinisekise ukuba uchaphazeleke ngqo na.
Ukubhukishwa Kwamakhaya Oncedo okurhoxisiweyo. Inkcazelo engakumbi Ngamakhaya Oncedo.
Iintlekele zemvelo, ubugrogrisi, ukuqhankqalaza koluntu/ukungazinzi kwezopolitiko ezithintela undwendwe ukuba lungakwazi ukuya okanye ukubuya endaweni ethile, okanye ezibangela kube nzima ngombuki zindwendwe ukwamkela iindwendwe.
Isifo esingubhubhane okanye ukugula okuchaphazela ngesiquphe indawo okanye iqela lonke labantu. Oku akuziquki izigulo ezisele zikho ibe ziqhelekile kwingingqi ethile—ngokomzekelo, imalariya eThailand okanye i-dengue fever eHawaii. Naziphi na izinto ezitshintshwa kwipolisi yethu ngokuqhambuka kwesifo, kunye nezinto esebenza kuzo ipolisi, ziza kutshintshwa ngokusekelwe kwizaziso zoMbutho Wezempilo Wehlabathi kunye nabasemagunyeni basekuhlaleni.
Imiqathango yokuhamba ebekwa ngurhulumente, ngamagosa ezomthetho, okanye ngumkhosi ethintela ukuya okanye ukubuya kwindlu okanye kwindawo yento enokonwatyelwa.
Amacebiso ngokhuselekoasebenza kwindawo ekuyo indlu okanye into enokonwatyelwa okanye kwindawo elusuka kuyo undwendwe.
Ukuphela kwezinto ezibalulekileyo ezinokusetyenziswa ezichaphazela indawo ekuyo indlu okanye into enokonwatyelwa.
Ukutshintshwa kwezinto ezifunekayo ukuze umntu abe ne-visa okanye ipasipoti okwenza ukuba kungakwazeki ukuhamba kuyiwe kuloo ndawo. Oku akuwaquki amaxwebhu okuhamba alahlekileyo okanye aphelelwe lixesha.
Ukuba uqinisekisile ukuba imeko yakho iyazifikelela ezi mfuno zingasentla, qala urhoxise ukubhukishwa kwamakhaya akho okanye Kwento Enokonwatyelwa Yakwa-Airbnb. Ukuba ukubhukisha kwakho kuqukiwe phantsi kwemeko ongenakuyinceda eyaziwayo, uza kwaziswa ukuba indawo oyibhukishileyo iyakufanelekela ukurhoxiswa ngaphandle kwesohlwayo, kwaye uza kubuyiselwa yonke imali yakho ukuba ulundwendwe.
Ukuba ukubhukisha kwakho akufaneleki ngokuzenzekelayo, qhubeka urhoxise ukubhukisha kwakho uze emva koko uqhakamshelane nathi ukuze ufake isicelo Siza kukubonisa ezinye izinto omele uzenze, eziquka ukufaka amaxwebhu afunekayo nokulindela kwiqela lethu ukuba lihlole isicelo sakho. Izicelo kufuneka zifakwe zingekapheli iintsuku eziyi-14 emva kokuba kurhoxisiwe.
Qaphela: Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda engezantsi isebenza kuzo zonke iintsuku zokubhalisela ukufika ezisemva okanye nge-20 kaJanuwari 2021. Kuzo zonke iintsuku zokubhalisela ukufika ezingaphambi kwe-20 kaJanuwari 2021, kuza kuqhubeka kusebenza iPolisi ekhoyo engasentla. Ukusebenza kwale Polisi kwimeko yeCOVID-19 akuzukutshintsha xa iPolisi entsha iqalisa ukusebenza nge-20 kaJanuwari 2021 ibe iimeko ezininzi ezinento yokwenza neCOVID-19 ziza kuqhubeka zingaqukwanga.
Le Polisi Yemeko Ongenakuyinceda icacisa indlela ekurhoxiswa ngayo xa kuvela iimeko ezingalindelekanga ezingapha kwamandla akho emva kokubhukisha zibe zisenza kungakwazeki okanye ibe kukophula umthetho ukugqiba ukubhukisha kwakho. Le Polisi isebenza ekubhukisheni kweendawo zokuhlala Nezinto Ezinokonwatyelwa.
Zeziphi iimeko eziqukiweyo
Le Polisi isebenzisa igama elithi "Imeko" xa ibhekisela kwezi meko zilandelayo ezenzeka emva kokubhukisha, ebezingalindelekanga ngoku bekubhukishwa nezithintela okanye ezithintela ngokusemthethweni ukugqitywa kokubhukisha.
Ukutshintshwa kwezinto ezifunwa ngurhulumente ukuze uhambe. Ukutshintshwa ngesiquphe kwezinto ezifunekayo ukuze ube ne-visa okanye ipaspoti okwenziwe liziko likarhulumente okuthintela ukuya kwindawo ebekuza kuyiwa kuyo. Oku akuquki amaphepha okuhamba alahlekileyo okanye aphelelweyo okanye ezinye iimeko zobuqu ezinento yokwenza nokuvumeleka kondwendwe ukuba luhambe.
Iimeko zongxamiseko okanye oobhubhane abachaziweyo. Iimeko zongxamiseko zasekuhlaleni okanye zelizwe, oobhubhane, neemeko zempilo yoluntu ezingxamisekileyo ezichazwe ngurhulumente. Oku akuziquki izigulo eziqhele ukubakho okanye ngokuqhelekileyo ezidityaniswa nengingqi ethile—ngokomzekelo, imalariya eThailand okanye i-dengue fever eHawaii.
Imiqathango karhulumente yohambo. Imiqathango yohambo emiselwe liziko likarhulumente ethintela ukuya, ukuhlala okanye ukubuya kwindawo ekuyo Indlu. Oku akuquki amacebiso ohambo anganyanzelekanga okanye izikhokelo zikarhulumente ezifana nawo.
Ukulwa komkhosi okanye eminye imilo. Iimfazwe, ukulwa, ukuvingcelwa, imfazwe yasekuhlaleni, ubugrogrisi, ukudubula, iibhombhu, ukuvukela, iitoyi-toyi, ukubhukuqwa, nokungalawuleki kwabantu.
Iintlekele zemvelo. Iintlekele zemvelo, izenzo zikaThixo, ukungabikho kweenkonzo ezibalulekileyo, ukudubula kwentaba-mlilo, ii-tsunami nezinye iimeko zemozulu egqithiseleyo nengaqhelekanga. Oku akuquki iimeko zemozulu nezemvelo eziqhelekileyo kangangokuba zinokulindelwa kuloo ndawo—ngokomzekelo, iinkanyamba ezenzeka ngexesha leenkanyamba eFlorida.
Zonke ezinye. Le Polisi ivumela kuphela ukurhoxisa Kwiimeko ezichazwe ngasentla. Zonke ezinye aziqukwanga. Imizekelo yeemeko le Polisi engavumeli ukurhoxisa phantsi kwayo iquka: isigulo esingalindelwanga, ukugula okanye ukwenzakala; izinto ezigunyaziswe ngurhulumente ezifana nomsebenzi wokugweba, ukuvela enkundleni okanye ukuthunyelwa emkhosini; amacebiso ngohambo okanye ezinye izikhokelo zikarhulumente (ezingezizo imiqathango yohambo); ukurhoxiswa okanye ukutshintshwa kosuku lomcimbi ububhukishelwe; kunye nokuphazamiseka kwezothutho okungenanto yakwenza Nemeko equkiweyo njengokuvalwa kweendlela kunye nokurhoxiswa kweenqwelo-moya, iitreyini, iibhasi okanye iinqanawa. Ukuba urhoxisa ukubhukisha kwezi meko, imali oza kuyibuyiselwa iza kuxhomekeka kwipolisi yokurhoxa esebenzayo koko kubhukisha.
Ukuba siye sakwazisa okanye sakhupha inkcazelo eqinisekisa ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, nceda ulandele imiyalelo yokurhoxisa esikunika yona. Xa siye sakwazisa okanye sakhupha inkcazelo ngendlela le Polisi esebenza ngayo, ufanele ukwazi ukukhetha ukurhoxisa phantsi kwale Polisi ngokuya kwiphepha Lohambo uze urhoxise ukubhukisha okuchaphazelekileyo. Ukuba ucinga ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, kodwa sibe singakwazisanga okanye singakhuphanga nkcazelo ngale Meko, nceda uqhakamshelane nathi ukuze urhoxise ukubhukisha kwakho. Kuzo zonke iimeko, ufanele ulungiselele ukunikezela ngamaxwebhu abonisa indlela Imeko ekuchaphazele ngayo okanye yachaphazela ukubhukisha kwakho.
Le Polisi isebenza kuko konke ukubhukisha okunosuku lokungena olusemva okanye ngosuku eqalisa ngalo ukusebenza. Le Polisi ayisebenzi xa kubhukishwe iLuxe okanye iLuxury Retreats, kuba zona zingena Kwipolisi yeLuxe Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe.
Yiya kwindawo ethi Uhambo ukuze ubone uhambo ofuna ukulurhoxisa Cofa indawo ethi Bonisa iinkcukacha zohambo Kutshwankathelo, cofa indawo eth…
Ababuki zindwendwe beendawo zokuhlala
Kuza kwenzeka ntoni ukuba ndifuna ukurhoxa ngenxa yokuba ndinengxaki nendlu okanye nombuki zindwendwe?
Awuyifumani le nto uyifunayo?
Khetha indima ukuze ufumane uncedo olulungiselelwe wena.
Ababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa